स्वास्थ्य को MCQs तयारि गर्ने तरिका – जनस्वास्थ्य खबर
स्वास्थ्य को MCQs तयारि गर्ने तरिका
रमेश कुँवर, १३ पाैष। लोकसेवा मा नाम ट्यालेन्ट ले भन्दा पनि मेहनती ले निकालेको धेरै देख्या छु मैले । मेहनत भन्दै मा बालुवा मा पानि खन्याएर रोपाइँ गर्ने योजना बनाउनु पनि होइन । चलाखीपूर्ण तरिका ले मेहनत गर्नु नै लोकसेवा मा सफल हुने तरिका हो । बिज्ञापन खुल्न भन्दा अगाडी सम्म को तपाइको तयारि ले निर्धारण गर्दछ तपाइको नाम निस्किन्छ वा निस्किदैन भनेर किनकि बिज्ञापन खुले पछी त दुनिया ले पढ्न सुरु गर्छ । मेरो विचारमा तपाइले यी तलका कुरा हरु लाइ बिशेष ध्यान दिनु पर्ला :
सर्बप्रथम त तपाइले आफु ले तयारि गरिरहेको पद को पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम को बारेमा बिस्तृत रुपमा ज्ञान हुनु पर्दछ । प्रत्येक बिषय को गहिराइ को बारेमा अध्ययन गर्नु निकै जरुरि छ । बिषय ले तपाइँ लाइ कुन गहिराइ सम्म को बुझाइ खोजेको छ त्यो जान्न निकै महत्वपुर्ण छ । पाठ्यक्रम को गहिराइ थाह नभई अध्ययन गर्नु भनेको मानौ “Strategy बिना War गर्न गए जस्तो”
कार्यबिबरण को अध्ययन :
तपाइँ ले तयारि गरिराख्नु भएको पद , त्यो पद बाट नेपाल सरकार ले गरेको अपेक्षा , व्यवहारिक सम्भावित ज्ञान को बारेमा राम्रो संग जानकार हुनु आवश्यक छ । जस्तै : सी एम ए पदको तयारि गर्ने लाइ CT scan को बिस्तृत ज्ञान आवश्यक नहुन सक्छ बरु त्यसको सट्टा मा खोप क्लिनिक , गाउँ घर क्लिनिक को बारेमा गहिरिएर पढ्नुपर्दछ।
लोकसेवा ले तपाइको बिषय बस्तु मा कत्तिको सरल ,सफा र गहिरो बुझाइ छ भन्ने मापन गर्छ । तपाइले कत्तिको आफ्नो दिमाग मा राख्न सक्नु हुन्छ भन्ने संग सरोकार हुदैन । तपाइको बिषय प्रति को Understanding जाच्ने हो ।
Make Curriculum wise Note:
सबै भन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको स्व अध्ययन गर्नु हो । पाठ्यक्रम र कार्य बिबरण को गहिराइ अनुसार को आफ्नो नोट बनाएर पढ्नु राम्रो मानिन्छ । बिषय बस्तु को अंक भार र मेहनत को तालमेल मिलाउन जरुरि छ । नँया सार्बजनिक गरिएका राष्ट्रिय तथ्यांक लाइ स्मरण गर्नुहोस र नोट बनाउदा खेरि सकिन्छ भने कुनै कुरा संग Linkage गर्नु र स्मरण गर्न सजिलो हुने खालको Pneumonics बनाएर पढ्नु राम्रो हुन्छ । जस्तै DOTS कति जिल्ला मा Pilot भएको थियो ?? DOTS मा चार वटा अक्षर छन् त्यसैले चार जिल्लामा हो । अब तपाईलाई सम्झिन नि सजिलो हुनेछ ।
Make Good Friend circle:
लोकसेवा को तयारि गरिराख्नु भएकाले आफु लाइ सकारात्मक , क्रियाशील बनाइराख्ने खालको संगत बनाउनु जरुरि छ । आफु जस्तै तयारि गरिरहेका र सम्भव भएसम्म आफु भन्दा धेरै बिषय बस्तु ज्ञान , अनुभव भएका साथि हरु संग को संगत ले पढ्ने खालको बाताबरण बन्दछ । बिषयगत क्षेत्रमा दक्षता भएको व्यक्ति लाइ आफ्नो मेंटर (MENTOR) बनाउनुस ।
अध्ययन सामग्री को छनौट :
मेरो बुझाइ मा यो सबै भन्दा महत्वपुर्ण र सम्बेदनशील कुरा हो । बजार मा धेरै किसिमका शिक्षण सामाग्री छन् र जस मध्ये थोरै गुणस्तरीय छन् । तपाइको ठाउमा यदि म भएको भए म नेपाल सरकार को उच्च पदमा कार्यरत शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति हरु बाट लिखित/संकलित किताब हरु लाइ प्राथमिकता मा राख्थे । सके सम्म धेरै गुणस्तरीय किताब हरु किन्नु होस्, सबै को अध्ययन गर्नु होस् र महत्वपुर्ण कुरा हरु लाइ नोट मा टिपोट गर्नु होस् र तपाइको नजरमा गलत ठहरिएका लाइ Highlight गरेर टिप्नु होस् र सहि उत्तर खोज्नु होस् ।
जति सक्नु हुन्छ त्यति धेरै MCQs समाधान ,अध्ययन र स्मरण गर्नु होस् । बिगत का बर्ष हरुका MCQs प्रश्न हरु लाइ पानि बनाउनुस । आफुले तयारि गरि रहेका पद भन्दा माथिल्लो तहका पुराना MCQs हरु को राम्रो अध्ययन गर्नुहोस । धेरै जनाले आफु ले जानेका बिषय बस्तु मा मात्रै आफ्नो समय खर्च गरिरहेका हुन्छन र याद राख्नुस तपाईलाई असक्षम बनाउने भनेको तपाई लाइ कम ज्ञान भएका बिषय बस्तु हुन् ।
र अन्त्य मा तपाइँ ले अनावश्यक कुरामा समय खेर फालिरहेको बेला अरु कसैले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ र जो ले धेरै अध्ययन गर्यो उसैको नाम निस्किने प्रबल सम्भावना हुन्छ । त्यहि भएर प्रत्येक सेकेण्ड लाइ Fruitful बनाउनु होस् र आफ्नो खानपिन , शारीरिक व्यायाम , मानसिक शान्ति लाइ पनि बिशेष ध्यान दिनुस । यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो तपाईहरु आफ्नो आवश्यकता र स्वविवेक प्रयोग गरि बुझ्नु होला ।
(लेखक जि स्वा का बाजुरा का जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन् र HA BOOK (Beathealth Loksewa ) , PHO MCQs book, First paper (Beathealth Loksewa) का लेखक र एसियन कलेज , ललितपुर का पाचौ ब्याच का बि पी एच टपर पनि हुन् ।)
देबराज रेग्मी, २८ चैत्र। गाजर हाम्रो लागि कुनै नौलो खानेकुरा त होइन तर पनि यसको फाइदा सुन्दा चाही तपाइलाई अचम्म लग्न सक्छ । हामीले यसलाई सोझै सलादको रुपमा अथवा पकाएर तरकारी वा हलुवाको रुपमा सेवन गर्दै आइरहेकाछौ। यो खानमा स्वादिसष्ट मात्र होइन शरीरलाई पनि धेरै फाइदा गर्ने गर्दछ भनेर पुष्टि पनि भएको छ। प्रति १०० ग्राम गाजरमा ८८ ग्राम पानि, ०.९ ग्राम प्रोटिन, ४.७ ग्राम गुल्कोज, २.८ ग्राम रेशा, ०.३ ग्राम बोसो र केहि मात्रामा भिटामिन के, बिटा केरोटिन ,एन्टी अक्सिडेन्ट आदि पनी हुन्छ।
यसको दैनिक सेवनले हाम्रो आँखा र छालालाई स्वास्थ्य बनाएर हामीलाई भर्खरको जस्तो बनाउछ । यानकी उमेर ढल्केसंगै हुने चाउरिपन पनि कम गर्दछ । आउनुहोस यसको फाइदा के कस्तो छ कुरा गरौँ।
१. यसमा विटा केरोटिन हुन्छ जसले मांसपेशीहरुलाई कसिलो बनाउछ र उमेर ढल्के संगै हुने चाउरिपन पनि कम गर्दछ।
२. यसमा हुने बिटा केरोटिनले भिटामिन ‘ए’ निर्माणमा सहयोग गर्दछ जसले गर्दा आँखा स्वास्थ्य हुन्छ ।
३. भिटामिन- ए ले आँखाको सिलिअरि मशललाई स्वस्थ बनाएर उमेर ढल्कदै गर्दा हुने आखाको कमजोरी बाट पनि जोगाउछ।
३. यसमा भएको विटा केरोटिनले रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्दछ। त्यसैगरी, हाम्रो शरीरको कोषहरुलाई स्वास्थ्य पनि राख्दछ।
३. यसमा एन्टी अक्सिडेन्ट गुण हुन्छ जसले उमेर वृद्धि संगै स्वतन्त्र आयोनले गर्ने कोष ह्रास ( कोष मर्ने क्रम ) नियन्त्रण गर्दछ । जसले गर्दा हाम्रो छालामा चमक आउनुको साथै छालाको चाउरीपन पनि कम हुन्छ।
४. यसमा हुने फल्कारिनोल तत्वले हामीलाई क्यान्सर हुनबाट बचाउछ। त्यसकारण, दैनिक गाजरको सेवन गर्दा क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
५. गाजरमा प्रशस्त मात्रामा रेशा हुने हुदा पाचन शक्ति बढ्नुको साथै शरीरमा चिनीको मात्र कम गर्दछ र चिनीजन्य रोगको जोखिम कम हुन्छ ।
६. यसमा भएको रेशाले हाम्रो पाचन प्रणालीले गर्ने बोसो शोषणमा कम गरि शरीरको तौल बढ्न दिदैन । जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा हुने मोटोपन कम हुन्छ। मोटोपन कम भएपछी मोटोपनाबाट हुने रोगहरु र मुटु संग सम्बन्धित रोगहरुको संक्रमणको जोखिम पनि कम हुन्छ।
७. यो पोटासियमको राम्रो स्रोत हो जसको सेवनले हाम्रो मानसिक थकाई कम गर्दछ ।
८. यसमा भएको भिटामिन ‘के’ ले मुटुलाई स्वास्थ्य बनाउछ अनि मुटु सम्बन्धित रोगको जोखिम कम गर्दछ। भिटामिन के हाम्रो आयु बढाउने भिटामिन पनि हो । यसले हाम्रो छाला स्वास्थ्य बनाउछ र हामी कम उमेरको जस्तो देखिन्छौ।
९. गाजरमा भएको भिटामिन ‘के’ले रगतमा प्रोथ्रमबिन नामक प्रोटिन उत्पादन गर्न सहयोग गर्दछ र छालालाई पनि स्वास्थ्य राख्दछ। प्रोथ्रमबिन रक्तस्राब भएको बेलामा रगतलाई जमाएर (blood clotting) रगत वग्नबाट जोगाउने एकप्रकारको रगतमा हुने प्रोटिन हो।
१०. यसमा भएको प्रोटिन र गुल्कोजले हाम्रो शरीरको कोषलाई आवस्यक पर्ने शक्ति दिनुको साथै कोष पुन निर्माणमा पनि सहयोग गर्दछन।
११.गाजरले हाम्रो शरीरको कोलेस्टेरोलको मात्रा कम गर्दछ जसले गर्दा मुटु सम्बन्धित रोगहरुको जोखिम कम हुन्छ।
यसकारण गाजरमा धेरै पौष्टिक पदार्थहरु हुने हुदा हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा गर्दछ। तसर्थ, हामीले दैनिक रुपमा गाजरको सेबन गर्नु राम्रो हुन्छ। यसलाई काचै अथवा नपाकाईन सलादको रुपमा खानु ठिक हुन्छ किनकि पाकाउदा यसमा भएको पोषणको मात्रा नस्ट हुनसक्छ।
(रेग्मी चितवनका जनस्वास्थ्य कर्मी हुन् र हाल राजिव गान्धी विश्वविद्यालयमा एमपीएच गर्दै छन् )
के नेपाल लगायत अविकसित राष्ट्रहरुले स्तन क्यान्सर निदानमा लगानी गर्नुपर्दछ ?
१९-फाल्गुन, काठमाडौँ: वर्तमान अध्ययन अनुसार नेपालमा कुल रोगको भार मध्ये नसर्ने रोगहरुको स्थान 60 प्रतिशत रहेको छ । नसर्ने रोगहरुबाट हुने कुल मृत्युदर मध्ये क्यान्सरको योगदान विश्वमै प्रमुख स्थानमा पर्दछ। यसलाई नेपाली भाषामा अर्बुद रोगले समेत चिनिन्छ । विश्वमा हुने क्यान्सर मध्ये पुरुषहरुमा प्रोस्टेट क्यान्सर र महिलाहरुमा स्तन क्यान्सरको समस्याले मुख्य स्थान लिएको छ । नेपालमा भने पुरुषमा फोक्सोको क्यान्सर तथा महिलामा पाठेघरको क्यान्सर समस्या ज्यादातर देखिएको बिभिन्न अनुसन्धानले पुस्टि गरेका छन ।
नेपाल लगायत अविकसित रास्ट्रहरुमा स्तन क्यान्सरको morbidity र disease burden बढ्दो छ। यो रोग धनि मुलुकका महिलाहरूको रोग भएतापनि पछिल्लो समयमा जीवनस्तरमा आएको व्यापक परिबर्तन सगै बिस्तारै अविकसित मुलुकका महिलाहरुको मृत्युको प्रमुख कारण बन्दै आएको छं । नेपालमा मुख्यतः चरम आर्थिक अभाब र क्यान्सरको अन्तिम अवस्थामा आएर रोग निदान हुने कारणले गर्दा यस रोगबाट धेरै महिलाहरुको मृत्यु भएको छ । अत: स्तन क्यान्सरबाट हुने morbidity र मृत्युको जोखिमबाट बच्न अविकसित मुलुकहरुले रोग निदानमा (Disease screening) लगानी गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
विश्वमा प्रचलित स्तन क्यान्सर निदानका पद्दतिहरु :
Mammography: स्तन क्यान्सर निदानमा धेरै प्रयोग हुने विधि हो । जसले क्यान्सरको morbidity घटाउन निकै मद्त गर्दछ, प्राय: धनि राष्ट्रहरुमा यो विधि प्रयोगमा छ । तर यो विधि तन्नेरी उमेरका महिलाहरुको रोग निदानमा खासै प्रभाबकारी हुन सकेको छैन । यस विधिको प्रयोगको उपयोगिता बारे अविकसित मुलुकले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो विधिले समग्रमा अविकसित मुलुकका महिलाहरुको मृत्युदरलाई कम गर्दैन किनभने अविकसित देशका महिलाहरुमा प्राय: तन्नेरी उमेरमा स्तन क्यान्सर देखिन सुरु गर्दछ ।
Clinical Breast Examination: यो विधि Mammography भन्दा सस्तो र किफायती पर्न जान्छ स्तन क्यान्सर निदानमा। अत: नेपालमा यसको प्रयोग स्तन क्यान्सर निदानमा भरपुर उपयोग गर्न सकिन्छ।
Disease screening का विधिहरुको रास्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमा संयोजन गर्नपुर्ब यसको किफायती (Cost effectiveness) र औचित्यताबारे बारे व्यापक अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।अविकसित रास्ट्रहरुले स्तन क्यान्सरको भारलाई घटाउन मुख्यतः धुम्रपान नियन्त्रण कार्यक्रम, स्वस्थ्यकर खानपिन र आहार तथा स्वस्थ्यकर जिबनशैलीलाई बढावा दिने गतिबिधिहरू संचालन गर्नुपर्ने निचोड यस अनुसन्धानले निकालेको छ ।
डा.बिशाल ज्ञवाली,MD,PhD (लेखक हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा क्यान्सर पोलिसी विधामा अध्यनरत छन)
यस अनुसन्धानबारे बृस्तित रुपमा हेर्नु परेमा कृपया तलको लिंकमा गएर हेर्न सक्नु हुन्छ: